लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता – Nepali Digital Newspaper
नेपाल प्रहरीका ‘अभूतपूर्व’ आईजीपी !
वरिष्ठ नेता पौडेललाई जापानको विभूषण
घटना र विचार, न्युज डेस्क !2weeks ago May 22, 2020
रमेश लम्साल र नारायण ढुङ्गाना (रासस)
भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म एकतर्फीरूपमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्र यसबारेमा नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि भने दशकौँदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद् थप सतहमा आएको छ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुवातका रूपमा लिइएको छ । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा पनि गरेको छ । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश सरकारको साथमा रहेको देखिएको छ ।
बुधबार नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया र भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखिएको अराजक शैली तथ्यभन्दा बाहिरको छ । पटक पटक नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पु¥याउने काम गरेको भारतले सार्वभौमसत्ताको विषय ल्याउँदा आफूले अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरे–नगरेको बारेमा भने केही बताएको छैन ।
गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो । भारतको उक्त कदम आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै सरकारले वैशाख २८ गते यहाँस्थित भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रामार्फत भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो । गत कात्तिकमा भारतले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नोभेम्बर १० मा आयोजना गर्नुभएको सर्वपक्षीय बैठकले सीमा समस्या समाधानका लागि प्रष्टरूपमा अगाडि बढ्न सरकारलाई मार्गदर्शनमात्रै प्रदान गरेन, भारतलाई पुनः कूटनीतिक नोटमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । नेपालको पटक पटकको प्रयत्नपछि भारत नोभेम्बर २० मा वार्तामा बस्न तयार रहेको भन्दै पत्र पठाउन बाध्य भएको थियो । तर नेपालले नोभेम्बर २३ मा वार्तामा बस्न आग्रह गरे पनि भारतले कुनै जवाफ दिएन ।
नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशीरूपमा भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता भएपछि भने विवाद थप बल्झिएको थियो । त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले तत्कालै कूटनीतिक नोटसमेत दुवै देशलाई पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर सरकारले आफ्नो सिमानाको विषयमा गम्भीर कदम चाल्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको सीमाविद्को भनाइ छ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने विषयमा सन् १८१६ देखि १९९३ सम्मको नक्साले प्रष्ट पार्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उल्लेख गर्नुहुन्छ । सो क्षेत्रमा भारतले एसएसवीसहित इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गरी दैनिक हेलिकप्टर गस्ती गर्दा नेपालका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत नहुनु भने विडम्बना हो ।
दार्चुलाको महाकाली किनारैकिनार भारतले ठूलो लगानी गरेर सडक बाटो बनाएको छ । कतै नागबेली त कतै सिधा सडक निर्माण भएको छ । उसले सन् २००८ देखि नै सडक बनाउन थालेको थियो । उसको चीनसँगको यो मुख्य व्यापारिक मार्ग बनाउने कसरत जारी छ । यो मार्ग चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा उत्तम नाका मान्छन् भारतीयहरू । गत कात्तिकमा तीनै क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । केहीअघि गुञ्जा, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्मै सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो । त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ ।
दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा अहिले भारतको एसएसवी बल र इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ छ । सीमा क्षेत्रमा उनीहरूको चहलपहल बाक्लो छ । फोर्सका हेलिकप्टर दार्चुलाको सदरमुकाम आसपास भएर महाकाली नदी किनारैकिनार दैनिक ८÷१० पटकभन्दा बढी ओहोरदोहोर गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीलाई जहाज र हेलिकप्टरले हवाई प्रदूषणसमेत गराउँदै आएको छ । उसले त्यहाँको सडक निर्माण सामग्रीसमेत हवाईमार्गबाटै लाने गरेको दार्चुलाका स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
सीमा जोगाउन यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा तैनाथ नगरेसम्म नेपालको शिर उँचो हुँदैन । त्यसका लागि हाल विवादित बन्न पुगेको नेपाली भूभागमा भारतको सुरक्षा फौज रहेकाले एकैपटकमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पु¥याउन कठिन छ । कूटनीतिकरूपमा छलफल र वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुरक्षा विज्ञ तथा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा इन्द्रजित राई सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको निगरानी बढाउनु महत्वपूर्ण कदम हो भन्नुहुन्छ । पुरानो सीमा विवाद भएकाले कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
भारतसँग जोडिएको सबैभन्दा लामो सीमा दूरी दार्चुला र झापाको १४६÷ १४६ किलोमिटर हो । कालापानीको उचाइ समुद्र सतहबाट तीन हजार ५०० मिटर र लिपुलेकको उचाइ पाँच हजार मिटर रहेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८८० किलोमिटर दूरीको छ । नेपाल र भारतबीचका सीमा नाका १५९ वटा छ । नेपाल र भारतको सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद नै छ ।